Matte Mnyama utsale ezantsi iimpompo
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Matte oMnyama oTsala-ezantsi weFrayitethi yasekhitshini
【Khathalela Impilo Yakho】Le mpompo yekhitshi esebenza nzima eyenziwe nge-eco-friendly 304 steel stainless ayinalothe kwaye ibeka impilo yosapho lwakho kuqala. Ugqibo lwenickel olulayile oluninzi, ukuthotywa okuphezulu kunye nefuthe elimelana nomhlwa.
【Iindlela ezi-3 zokuHamba kwamanzi】QHUBA/TSHELA/YIMA. Imowudi yomlambo enamandla yokugcwalisa imbiza ngokukhawuleza; imowudi yokutshiza yoxinzelelo oluphezulu yokuhlamba izitya kunye nemifuno; Imowudi yokunqumamisa ukugcina amanzi kunye nokunqanda ukutshiza kwimowudi yokwenza izinto ezininzi.
【I-Arc ephezulu ye-360 ° iFaucet eSwivel】Uyilo oluphezulu lwe-arc lushiya indawo eyaneleyo yokusebenza. I-360° i-spout ejingayo igqibelele kwiisinki enye okanye ezimbini. Uyilo lomqheba omnye kulula ukulawula ubushushu kunye nokuhamba kwevolumu ngexesha elinye.
【IFaucet eneTrala Phantsi Isitshizi】Intloko yesitshizi inokutsalwa ukuya kuthi ga kwi-80cm, eyandisa indawo yokuhlamba ijikeleze isinki. Isixhobo sokungenisa umbhobho se-ABS sobunjineli sinandipha ubomi obude.
【Kulula ukuyifaka】Umbhobho wokutsala kunye nemibhobho yonikezelo lwamanzi ifakelwe kwangaphambili, nto leyo yonga ixesha elininzi lofakelo. Zonke izixhobo zokufakela zibandakanyiwe, kubandakanywa ipleyiti yedekhi ye-8-intshi (ilingana ne-1 okanye i-3 yesinki yasekhitshini yomngxuma), iiglavu, kunye ne-gaskets ekhululekile! IWaranti yeMinyaka emi-5, iMbuyiselo yeNtsuku ezingama-90, iNkxaso yoMthengi ngexesha.
2310700B Imiyalelo yokufakwa
I-WOWOW Tsala iiFaucets zaseKhitshini ezingama-2310700B
Ikhitshi inokuba yindawo endlwini yakho apho uchitha ixesha lakho elininzi. Ayisiyiyo kuphela ikhitshi indawo apho ulungiselela khona ukutya kwakho. Ukongeza, uninzi lwabantu lubeke ubomi babo ekhitshini. Cinga ngomzekelo wokutya ekhitshini kunye netafile enkulu yokutyela ecaleni kwalapho kwenziwa khona ukutya. Nokuba luphi uhlobo lwekhitshi onalo, uyilo kunye nokusebenza zizinto ezimbini ezibalulekileyo kulo. Xa uyila okanye uyila kwakhona ikhitshi lamaphupha akho, ufuna ukwenza umbono omkhulu. Ukukhethwa kwetephu yasekhitshini ngenxa yoko kubaluleke kakhulu. Nangona iipompo zasekhitshini zinokuba zincinci, ziindawo ezijolise kwindalo kulo naliphi na ikhitshi. Ukubona kwabantu ngokwendalo kutsaleleka kumpompo wasekhitshini. Ke ngoko ngokuqinisekileyo uya kwenza uluvo nge-WOWOW ephezulu ye-arc matte emnyama yehlisa itompu yekhitshi! I-WOWOW matte emnyama itsalela phantsi itephu yasekhitshini inika umgangatho ophezulu wokutsala itephu yasekhitshini uyilo oluhle ngexabiso eliphantsi. Kungoko le matte emnyama itsalela phantsi itepu yekhitshi ikunika elona xabiso lokusebenza lixabiso uzakufumana kwintengiso.
Uyilo olunesitayile phantsi isitovu sombethe ekhitshini kwimatte emnyama
I-WOWOW ephezulu ye-arc matte emnyama isuswe phantsi isitovu sekhitshi ifakwe kuyilo oluphefumlelweyo lweklasikhi olwenziwe ngokutsha neenkcukacha zesitayile zanamhlanje. Ngesi sizathu, le faucet yasekhitshini iya kongeza ukuchukumisa kobukrwada phantse kuyo nayiphi na ikhitshi. Ngokucacileyo kuya kufuneka ukhethe ngokufanelekileyo isitovu sakho ekhitshini. Ngendlela eya kuyila umanyano omnye kunye nokuyila kwekhitshi lakho. Uncedo lwale matte emnyama yokudonsa ikhitshi lasekhitshini kukuba lunokudityaniswa noyilo lwendabuko, kunye nokwakhiwa kwekhitshi kwanamhlanje. Nokuba yeyiphi na indlela, i-WOWOW's matte emnyama isuswe phantsi isitepu ekhitshini iya kuqinisekisa ukumangalisa okumangalisayo kokugqiba ukuya kuthi ga kuyo nayiphi na ikhitshi. Ayisiyiyo le faoset ye-gooseneck matte emnyama ekhitshini ikunikeza uyilo oluncinci. Ukulula lolunye lweempawu eziphambili zeli khitshi yoyilo ekhitshini. Nangona kunjalo, iyabonelela kunye nengxelo yokuyilwa okumangalisayo ngombala wayo owahlukileyo kunye nokudibanisa okuthethelelayo kwezitayile. Ukunyaniseka, kwi-WOWOW sijonga le matte emnyama ikhuphe phantsi isuphu ekhitshini isiqwenga sobugcisa! Siqinisekile ukuba xa ufaka isicelo sokuphelisa isitofu ekhitshini ekhitshini lakho, liya kukhokelela ekuphenduleni kweendwendwe zakho
Mate omnyama udonsa phantsi itawuli kunye nokusebenza okuphezulu ekhitshini lakho
Uyilo lunye, kodwa ngokubaluleke nangakumbi kukusebenza kwesethiphu ekhitshini. Xa usekhitshini lakho ekhompyutheni yenye, kodwa okubaluleke ngakumbi kukusebenza kwesethiphu ekhitshini. Xa usekhitshini lakho kwisiseko semihla ngemihla, ulungiselela indalo emangalisayo, ufuna ukuba ikuxhase ngelixa ulungisa ukutya kunye nokucoca emva koko. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ukhethe isuphu ekhitshini exhasa iminqweno yakho malunga nazo zonke iintlobo zomsebenzi wasekhitshini. I-WOWOW ephezulu ye-arc matte emnyama yehlisa isitovu ekhitshini yenzelwe ukukunika ukusebenza okuphezulu. Ngaphandle kwento, i-matte emnyama yokukhupha isitofu esisekhitshini ithathwa njengenye yezona zinto zisebenzayo ezantsi zitshitshisa ikhitshi kwimarike. Indawo yokudonsa ye-matte ikhitshi emnyama ekhitshini isebenza ngokukhethekileyo. Okokuqala, unokususa ngokulula isiciko sokutshiza esizitshitshisayo ukuze ucoce onke amacandelo ekhitshi lakho. Emva kokusebenzisa intloko-yokuthoba intloko, iya kuyibuyisela endaweni yayo. Ngaphandle koko unokutshintsha ngokuthuthuzelayo phakathi kwesithambisi esithambileyo kunye nolukhuni ngokomsebenzi wakho wasekhitshini. I-swivel adaptha ye-matte emnyama yehlisa isitovu sekhitshi ekugqibeleni iya kukunika ukuguquguquka okudingayo.
Intsimbi engenanto i-matte emnyama idonsa isitofu ekhitshini
I-mato emnyama ye-matte ye-Wowow emnyama iyekwe phantsi ikhitshi elenziwe ngesinyithi kunye nezinye izinto ezisemgangathweni. Le faucet yasekhitshini epeyintiweyo ayisixhathisi nje ukukrala kodwa iyakhusela ukungcola kunye nokuchasa amabala. I-WOWOW matte emnyama yehlisa isitofu ekhitshini ke kulula ukuyicoca. Ukuswayipha okulula kuya kususa yonke intsalela yamaminerali kunye netshokholethi eyakha phezu kwentloko ye-silicone. Isikhenkcisi ekhitshini ngokwalo kulula ukucoca njengoko ibala lingayi kuncamathela kulo. Ukucoca rhoqo i-matte ekhitshini lakho elimnyama kuya kuqinisekisa unyamezelo lobomi obude. Indawo ephezulu ye-arc matte emnyama icekethe ikhitshi le-WOWOW kulula kakhulu ukuyifaka kwaye iza nemiyalelo ecacileyo yokufaka. Njengoko ilawula i-90 degrees phambili ukujikeleza, ikuvumela ukuba ufake le faetet emnyama nekhitshi kwiindawo ezinobunzima, ngaphandle kokucaciswa okuchasene nako. Abaqulunqi beWOWOW ke baye bacinga malunga nayo yonke into eyila le matte emnyama yehlisa isitofu ekhitshini. Ke ngoko I-WOWOW ayoyiki ukukunika iwaranti yeminyaka emithathu kwiqabane layo elimnyama lincothule ikhitshi lasekhitshini. Siqinisekile ngomgangatho weemveliso zethu kwaye siqinisekile ukuba uyakufumana intuthuzelo ephezulu kwaye iimveliso zethu ziya kwenza ngokomgangatho wazo. Xa kutheni nasiphi na isizathu ukuba le faucet yasekhitshini isenokungasebenzi njengoko ulindele kuthi, siya kuyibuyisela imveliso ngaphandle kwendleko eyongeziweyo kuwe. Okokugqibela, sinikezela ngomgaqo-nkqubo weentsuku ezingama-90 zokubuya mahala kwimeko yokuphelisa ikhephu ekhitshini elimnyama lingenakuba yile nto ubuyilindelekile kuyo. Njengoko ubona, sithembele kumlingane wethu omnyama ukuba akhuphe isitofu ekhitshini. Ngenxa yoko sinokulindela kuphela ukuba uya kwaneliswa nge-100%!
Izibonelelo ze-WOWOW ephezulu ye-arc iqabane elimnyama lijule phantsi itephu ekhitshini ngandlakan:
Umdibaniso owahlukileyo woyilo lwakudala kunye nolwanamhlanje
Nikeza ukusebenza okungcono okuhambelana neemfuno zakho
Ukudibanisa i-esthetics kunye nokusebenza okuphezulu
Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu
Isiqinisekiso seminyaka emi-3 kule arc iqabane lomtshato limnyama lincothule ikhitshi lasekhitshini
I-SKU: 2310700B iindidi: Thatha iipompu zekhitshi, IFaucets yasekhitshini tags: IArc ephezulu, Matte Black, Yehlisa
I-2.6 kg = 5.7320 lb = 91.7123 oz
I-WOWOW Black Pot Filler faucet for Ishushu kunye neCold ...